IMinecraft ivuliwe - Idlalwa kanjani ezikoleni? - Ukudlala
IMinecraft ivuliwe - Idlalwa kanjani ezikoleni?
I-Minecraft ngumdlalo ophumelela ngaso sonke isikhathi okhona nasesikhathini sanamuhla. Ihluzo le-blocky ne-pixelated libe yindawo yalo yokuthengisa eyinhloko. Ngisho nasembonini yokudlala esezingeni eliphakeme, ihlala ingukukhetha kubantu abaningi. Kungani? Kungenxa yenkululeko yokwakha abalingiswa bakho nomhlaba wakho. I-Minecraft ikwazi ukwenza ngezifiso ngokuphelele.
Kodwa-ke, njengoba kuwumdlalo odumile, isikole sakho kungenzeka sikubekele imingcele ukufinyelela kwaso. Mhlawumbe awukwazi ukuyifinyelela nge-wifi yesikole. Ungayidlala kanjani iMinecraft eSikoleni? Sizokhuluma ngezindlela ezintathu ezingatholwa yiMinecraft esikoleni.
Ufuna ukudala izikhumba zakho ku-Minecraft? Hlola Imibono nezeluleko ezinhle kakhulu ze-Minecraft Skin esihlokweni sethu sakamuva.
I-Minecraft ivuliwe: Sebenzisa Amakhompyutha Esikole
Uma ungenayo idivayisi yomuntu siqu noma ikhompyutha ongaletha ngayo esikoleni, uzoncika kwikhompyutha yesikole. Manje, kunezinkinga ezithile lapho ubheka amakhompyutha esikole ukudlala iMinecraft.
Okokuqala, izidingo zesistimu kungenzeka zingafani, ikakhulukazi ekusebenzeni kwemifanekiso. Ngakho-ke, kuzodingeka udlale iMinecraft kuzilungiselelo zemifanekiso ephansi kakhulu ukuqinisekisa ukuthi ingasebenza ngokushelela futhi ikulethele isipiliyoni sokuntywila.
Uma uhlela ukudlala ku-inthanethi, ungahle uthande ukubheka isivinini se-inthanethi. Kwesinye isikhathi kuba khona ikepisi lejubane elingenza kube yinselele ukudlala iMinecraft kwi-PC yesikole. Kunoma ikuphi, kukuwe ukuthi uzodlala kanjani iMinecraft kukhompyutha yesikole.
Uma uziqonda lezi zingcuphe nokwehla kokusebenza, ungaqhubeka nokudlala ingozi. Kodwa-ke, uma ikhompyutha yakho ine-admin ngokwehlukana, kungadingeka ukhethe ifayela elihlukile.
Yiliphi Ifayela Le-Minecraft Lokulanda Ku-PC Yesikole?
Kunamafayela amabili atholakalayo we-Minecraft ukulanda ku-PC. Kukhona ifayela le-.msi ne-.exe. Uma ukwazi ukufinyelela njengomlawuli we-PC, ungasebenzisa ifayela le-.msi bese ulifaka. Kodwa-ke, izikole eziningi zivimbela ukufinyelela kwe-admin kwabafundi. Ngakho-ke, kuzodingeka ulande ifayela le-.exe. Ungakhathazeki! Ngeke ithinte igeyimu yakho. Yilokho nje okutholakala kubasebenzisi abangabaphathi. Ungalanda ifayela le-.exe kusuka ku- lapha .
Ungalandela inqubo yokusetha nokufaka ejwayelekile. Uma ungafuni ukuthi abaphathi bathole ukuthi une-Minecraft efakiwe, ungahle uthande ukuyigcina kwenye indawo.
Ungayivimba kanjani iMinecraft Esikoleni?
Ukulanda ifayela elinikezwe ngenhla .exe kufanele kuvule iMinecraft ye-PC yesikole sakho. Noma kunjalo, inethiwekhi ihluke ngokuphelele. Kuyinselele ukudlala iMinecraft kahle uma ungenayo i-intanethi esikoleni. Nazi ezinye izindlela ongazisebenzisa:
1. Sebenzisa i-Hotspot yakho
Cishe wonke ama-PC asebenzisa i-wifi kulezi zinsuku. Noma i-PC yakho yesikole ingenayo i-wifi device, ungayithenga kalula. Idivayisi ejwayelekile ye-wifi ishibhile kakhulu futhi izokwenza umsebenzi wenziwe. Okulandelayo, ungasebenzisa i-Hotspot yefoni yakho bese wenza kusebenze ukuxhumeka kwe-inthanethi. Xhuma i-inthanethi kusuka kwi-PC uye ku-Hotspot yefoni yakho.
Akuyona indlela ephumelela kunazo zonke njengoba kuncike kakhulu kusivinini se-inthanethi sefoni yakho nasekutholakaleni kwenethiwekhi. Noma kunjalo, kuwukugqekeza okuhle kakhulu ongakusebenzisa esikoleni ngaphandle kwenkinga.
Uma uxhumano lwe-inthanethi lwefoni yakho lubiza kakhulu noma lungafinyeleleki kahle esikoleni, lapho-ke kungadingeka ukuthi uthembele ku-wifi yesikole. Kodwa-ke, isikole sakho singavinjelwa iMinecraft, phakathi kokunye ukufinyelela kwewebhusayithi. Manje yini ongayenza?
2. Sebenzisa i-VPN
Lokhu kuyindlela engcono kakhulu uma ungafuni ukutshala imali kudivayisi ye-wifi yekhompyutha yesikole sakho. Uma ungafuni ukusebenzisa iHotspot yeselula yakho, usebenzisa i- I-VPN kuhle. I-VPN ikhula ngokuthandwa. Kudala, akekho owayazi ukuthi ubuchwepheshe. Manje, ithandwa kakhulu ukuthi abahlinzeki abaningi bokusakaza basebenza ukukhiya kwe-VPN IP. Kodwa akudingeki ukhathazeke.
I-Minecraft ayivimbeli ukufinyelela kwe-VPN, futhi izovikela ukuxhumana kwakho. Okubaluleke nakakhulu, i-VPN iyindlela enhle uma ufuna ukuhlala ungaziwa njengoba uxhuma ne-wifi yesikole. I-VPN kuyisinqumo esifanele uma uzodlala iMinecraft kudivayisi yakho kunethiwekhi yesikole noma kwi-PC yesikole.
Nakhu okudingeka ukwenze ukuvula iMinecraft eSikoleni ngeVPN:
Landa i-VPN:Qiniseka ukuthi ulanda umhlinzeki wesevisi we-premium we-VPN. Ungahle ungafuni ukutshala imali njengoba ungumfundi. Kodwa-ke, abahlinzeki abaningi be-VPN banikeza ukufinyelela kumadivayisi amaningi. Ngakho-ke ungangena nabangani bese uthenge okubhaliselwe kwe-VPN. Akukona ukuhlakanipha ukusebenzisa i-VPN yamahhala njengoba kungathembeki, futhi kunganikezeli ngokuphepha okunolwazi okubaluleke kakhulu ekuxhumekeni kwe-VPN
Qalisa i-VPN:Uma ungafuni ukubhalisa, iningi labahlinzeki bezinsizakalo ze-VPN linikeza inguqulo yesilingo. Ezinye zikhawulelwe enanini lomkhawulokudonsa; abanye bakuhlinzeka ngokwezinsuku. Ngakho-ke, ungayisebenzisa ukuthola i-VPN. Njengoba uwafaka, ungaqala i-VPN kuxhumano lwakho lwe-wifi. Qiniseka ukuthi i-VPN isekela ukuxhumeka kwe-wifi.
Dlala i-Minecraft:Yilokho kuphela okudingekayo! Uma usufake futhi uqala i-VPN, izosebenza ngemuva, futhi uzokwazi ukudlala iMinecraft ku-wifi yesikole. Ungalandela lesi sinyathelo kunoma iyiphi idivayisi noma i-PC yesikole ukuze idlale kahle.
Dlala iMinecraft Ngaphandle kwe-wifi Hotspot Noma i-VPN:
Ngabe ufuna enye indlela yezinketho ezinikezwe ngaphezulu? Azikho uma ufuna ukudlala iMinecraft eyiqiniso. Ngenxa yokuqhubeka kwe-Xbox ye-Minecraft, ungayidlala i-cross-platform nabangani bakho. Kodwa-ke, yilokho kuphela ongakwenza.
Kodwa kukhona izindaba ezinhle! Kukhona iMinecraft Education Edition.
Kuyini i-Minecraft Education Edition?
Phakathi kwalobhadane, iMicrosoft yakhipha uhlobo lweMinecraft olwalugxile ekunikezeni ulwazi olucwilisa imfundo yabafundi. Uma uyisikhungo semfundo esinelayisense, ungathola iMinecraft Education Edition bese usisabalalisa phakathi kwabafundi.
Kukulethela umuzwa ofanayo omnandi nocwilisiwe weMinecraft nesikole. Ngamanye amagama, abadlali manje sebengaya esikoleni uqobo emhlabeni weMinecraft! Kuphola kangakanani lokho? Ngempela, ingeza kwisikhalazo esihehayo sikaMinecraft njengoba empeleni kufana nokudlala imidlalo nokwenza izinto eziningi.
IMicrosoft ingahle iqhubekisele phambili imfundo emngceleni omusha ngeMinecraft Education Edition.
Yini Oyidingayo Kwi-Minecraft Education Edition?
Udinga ukuba yisikhungo semfundo esisemthethweni ukuthola iMinecraft Education Edition. Okulandelayo, uma ngabe kukhona okukhona ngaphambili Ihhovisi 365 okubhaliselwe, uzothola amalayisense wamahhala (igama elihle lokubhaliselwe) le-Minecraft Education Edition.
Umphathi noma umnikazi weMinecraft uzofaka umdlalo kusistimu yabo, futhi ngomdlalo, kunenketho yesimemo. Kungcono ukucela abafundi ukuthi benze i-imeyili ‘yezemfundo’ noma ‘yobungcweti’ bese ubamema ngokuthumela isixhumanisi kulawo ma-imeyili.
Abantu kuphela abakwazi ukuthola lawo ma-imeyili abangalanda uhlelo lwezemfundo iMinecraft futhi bangene ngemvume. Yileyo ndlela abafundi nothisha abangaba ngayo nohlelo lwemfundo olungcono, olunempilo.
Uma ungakwazi ukukholisa abaphathi besikole sakho seMicrosoft Education Edition, leyo yindlela engcono kakhulu yokuyidlala esikoleni nasekhaya ukuze uthole ulwazi lokuntywila. Ungacela nabameli beMicrosoft ukuthi beze bazoyiphonsa esikoleni sakho.
Ngenye indlela, ukusebenzisa i-VPN njalo kuyindlela engcono kakhulu uma ungafuni ukuzihlupha nge-Microsoft Education Edition. Ekugcineni, konke ongakwenza ukusebenzisa i-Hotspot yeselula nedivayisi ye-wifi ye-PC yesikole ukujabulela umdlalo ngaphandle kokuphazamiseka.
Siyethemba ukuthi lo mhlahlandlela uzokusiza ucacise zonke izinto futhi ufunde okuthile okusha ngokuvula iMinecraft nokuyidlala esikoleni.
Lungisa Iphutha lokuxhuma kabusha le-Minecraft
Imidlalo yamaTwitch Prime Free (2020)
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi We-Microsoft Office?